Chad | Vaovao momba ny dia
Sary | The Guardian Nigeria
Tsy maro ny mpandeha no sahy mandeha any Chad. Ny fifandonana sy ny fampihorohoroana dia midika fa tsy miroborobo amin'ny hafainganam-pandeha sy haingam-pandeha toy izany ny firenena hafa eto amin'ny kaontinanta afrikanina ny fizahantany. Noho izany ny fotodrafitrasa momba ny fahasalamana, fitaterana ary fizahan-tany dia tena atahorana. Saingy, ny tsy fisian'izany rehetra izany indrindra no manosika ireo mpandeha sahy indrindra handeha hamaky any Chad hitady traikefa nahafinaritra.
Fa maninona no mandeha amin'ity toerana lavitra ity nefa mampidi-doza be? Ny ady hevitra manohana dia misy ny oasis any an'efitra avaratra, ny fiangaliana fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny Lake Chad na ireo andiam-bibidia marobe any amin'ireo valan-javaboary.
0.1 Tany Efitr'i Ennedi
0.2 Farihy Chad
0.4 Zakouma National Park
1 Ahoana ny fitsangatsanganana any Chad?
2 Fiarovana ao Tchad
3 Fepetra fanadiovana
Tany Efitr'i Ennedi
Ny efitra Sahara no lehibe indrindra eto an-tany. Izy io dia feno dongom-bato izay tsy misy afa-tsy ny fananganana vato toa ny Saharan Atlas, ny Ahaggar Mountains na ny Tendrombohitra Tibesti. Na izany aza, ny efitra Ennedi miaraka amin'ny endriny vato tokana no mety ho zoro mahavariana indrindra ao Sahara.
Anisan'ireo zava-manintona azontsika atao ny mitanisa ireo farihy tany an'efitra, tendrombohitra, lohasaha lohataona, sary hosodoko lava-bato talohan'ny toetr'andro ary andohalambo an-dranomasina fahiny izay any amin'ny ranomasina mando, izay niforona rehefa nivelatra ny farihy Chad.
Kilometatra maro hafa avy eo N'Djamena, dia ho hitanao izay iray tamin'ny farihy lehibe indrindra amin'ny rano velona manerantany.
Hatramin'ny voalohan'ny taona 70, ny Farihy Chad dia toy ny ranomasina ao afrika zarain'ny firenena maromaro toa an'i Nigera, Nizeria, Chad, ary Kamerona. Na dia 25 km000 ny faritry ny tendrony amin'ny orana, dia mihena tsikelikely ny farihy ary tao anatin'ny efa-polo taona lasa dia very 2% ny tampony, miaraka amin'ny voka-dratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ara-tsosialy mandrangitra ny mpanjono sy tantsaha.
Ao amin'ity tanàna ity dia mahavariana ireo trano fotaka tsara tarehy vita amin'ny loko, manampy loko iray amin'ny endriny monoton amin'ny tonony volontany mainty.
Zakouma dia eo atsimon'ny Sahara no farany avaratry ny valan-javaboary lehibe any amin'ny kaontinanta Izy io dia iray amin'ireo ohatra farany amin'ny tontolo iainana Sodanean-Sahelianina.
Ny tontolon'ity valan-javaboary ity dia tsy manam-paharoa, fitambaran'ny toerana malalaka miaraka amin'ny tany mando, ala savanna ary ala mikitroka.
Na dia nanimba ny biby ao amin'ilay faritra aza ny ady an-trano sy ny fanendahana, dia nitombo ny isan'ny biby ary ankehitriny dia misy andiam-boaloboka, antilopa roan, ary serfa. Ho fanampin'izany, vorona marobe no mipetraka amin'ny faritra mando Zakouma ary saika ny antsasaky ny zirafra Kordofan any Afrika no mipetraka ao amin'ity zaridaina ity, izay mahatonga ity toerana ity ho tontolo majika.
Ny biby hafa izay mipetraka amin'ny valan-javaboary dia ny cheetah, leoparda ary hyena misy pentina ary koa elefanta lehibe.
Eto ny mpandeha dia afaka mahita ny lafiny maitso sy mahafinaritra indrindra amin'ny fasika sandry Chad ary miala sasatra eo amoron'ny Ony Chari. Ny renivohitry ny landihazo eto amin'ny firenena dia tsy toerana tsy misy azy, tanàna mahafinaritra sy matory eo ambanin'ny aloky ny hazo goavambe. Ny Sarm Regional Regional Sarh dia mampiseho fitaovam-piadiana, zavamaneno ary sarontava taloha. Amin'ny alina dia matetika ny hipopotama no misondrotra eo amoron'ny Ony Chari.
Ahoana ny fitsangatsanganana any Chad?
Mba hidirana ao Chad, ilaina ny fahazoana visa. Ity firenena ity dia tsy manana masoivoho any Espana, noho izany ny visa dia tsy maintsy angatahina any Paris ao amin'ny masoivohon'i Chadian. Ho an'izany dia ilaina ny manolotra, ankoatry ny antontan-taratasy hafa, ny pasipaoro manana farafahakeliny 6 volana, ny taratasy fanamarinana ny vaksinin'ny tazo mavo ary taratasy fanasana.
Raha raisina ny tranga marefo ao Chad, noho ny antony ara-piarovana dia tsara ny manome fampahalalana momba ny fifandraisana sy hampandre ny masoivoho Espaniola ao Kamerona momba ny lalam-pitaterana ary hijanona ao Chad.
Fiarovana ao Tchad
Amin'izao fotoana izao dia tsy tsara ny mandeha mankany Chad raha tsy hoe tena tsy ilaina loatra izany. Raha mbola manapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny firenena ny mpandeha dia mora kokoa ny misoroka ny faritra rehetra amin'ny sisin-tany noho ny risika amin'ireo mpanafika mitam-piadiana ary indrindra ny sisintany miaraka amin'i Nizera, noho ny fandrahonana nataon'ny mpampihorohoro avy amin'ny Boko Haram.
Mandehandeha any Chad, tsy maintsy atao vaksiny amin'ny tazo mavo. Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia manolo-kevitra ny hanaovana vaksiny miady amin'ny hépatite A sy B, tazo typhoid, difteria ary meningite, ary koa ny vaksinin'ny tetanus. Torak'izany koa, fanolorana torohevitra mba hanarahana fitsaboana prophylactic manohitra ny tazomoka alohan'ny handehananao mankany amin'ity firenena afrikanina afovoany ity ary hitandremana ny fepetra amin'izany amin'ny moka.
Raha vao tonga eto amin'ny firenena, dia tsara ny mandray fepetra fidiovana ho an'ny sakafo: mihinana rano amin'ny tavoahangy foana, sorohy ny ranomandry sy voankazo ary legioma tsy misy masaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Tchad
Masada, mandeha amin'ny tantara